भोलि देखि लगातार तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने देउवाको घो:षणा ! - Nepali in Australia
September 12, 2021 autherLeaveaComment on भोलि देखि लगातार तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने देउवाको घो:षणा !
काठमाडौं । भोलिदेखि लगातार तीन दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । भोलि (शनिबार), आइतबार रक्षाबन्धन र सोमबार गाइजात्रा भएकाले भोलिबाट तीन दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएको हो ।।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
सरकारले गाइजात्राको अवसरमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै बिदा दिने भएतापनि यस वर्ष देशभर बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को हिजो बसेको बैठकले गाइजात्राको अवसरमा देशभर बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****